အမှား 0x80070570- ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မည်သို့ဖြေရှင်းသနည်း | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
အမှား 0x80070570- ၎င်းသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်းကို ဖြေရှင်းနည်း
Eder Ferreno | 12/01/2022 18:00 | ရုံးအလိုအလျောက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား error message တစ်ခုအား အခါအားလျော်စွာ ပြသပါသည်။ တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းသွားသည်ဟု ယူဆရပြီး ထိုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ချင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ဟု ယူဆပါသည်။ error သို့မဟုတ် error message ကြောင် Error 0x80070570 သည် များစွာရှိပုံရသည်။သင့် PC တွင် တစ်ချိန်ချိန်တွင် ထွက်ပေါ်လာဖွယ်ရှိသည်။ ဤအမှားက ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် အဘယ်ကြောင့်ပေါ်လာသနည်း။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီ Error 0x80070570 အကြောင်းပြောပါမယ်။ PC မှာ ခဏခဏ ထွက်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာတွင် ဤမက်ဆေ့ချ် ဘာကြောင့်ပေါ်လာရသည့် အကြောင်းရင်းကို သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင်ပေါ်လာသည့်အချိန်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖြေရှင်းနည်းများစွာကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် ဤအမှားကို အဆုံးတိုင်စေလိမ့်မည်။
1 Error 0x80070570 ဆိုတာဘာလဲ
2.1 ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပါ
2.2 updates များကို
2.3 အပ်ဒိတ်ကို ထပ်မံဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
2.4 hard drive ပျက်စီးမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
2.5 ဖိုင်ကို ထပ်မံဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဘာလဲ မှားယွင်းနေသည် 0x80070570
၎င်းသည် Windows ဗားရှင်းအားလုံးတွင် ပေါ်လာနိုင်သည့် အမှားတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် Windows 10 ကဲ့သို့သော ဗားရှင်းများတွင် နည်းပါးပြီး အသုံးနည်းသည့်အရာဖြစ်သည်။ ဖိုင် သို့မဟုတ် ဒရိုက်ဗ်ကဏ္ဍတစ်ခု ပျက်စီးသွားသောအခါ အမှား 0x80070570 တက်လာသည်။. ပျက်စီးသွားသော Drive သည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာစခရင်ပေါ်တွင် ဤအမှားအယွင်းမက်ဆေ့ခ်ျကို ပေါ်လာစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤမက်ဆေ့ချ်ကို စခရင်ပေါ်တွင် ရရှိပါက၊ သင်သည် ထိုဖိုင်ကို မှန်ကန်စွာ ဖတ်နိုင် သို့မဟုတ် ဖွင့်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
အချို့ကိစ္စများတွင်၊ ဤအမှားသည် ထွက်လာနိုင်သည်။ Windows တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း. ၎င်းသည် ဖိုင်အချို့ ပျက်စီးနေသဖြင့် ၎င်းကိုဖတ်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းအတွက် လိုအပ်သောဖိုင်များကို ဖွင့်ရန် မဖြစ်နိုင်သောကြောင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရပ်တန့်သွားပါသည်။ ၎င်းသည် အချို့သော လက္ခဏာများပါရှိသော အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အချို့သောအပြုအမူများကို PC တွင်တွေ့ရှိပါက၊ တစ်ချိန်ချိန်တွင် ၎င်းသည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်-
စနစ်ဒစ်ပေါ်တွင် သိုလှောင်မှုနေရာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး Windows သည် ပုံမှန်ထက် နှေးကွေးသည်။
မလိုလားအပ်သော အမှားအယွင်း မက်ဆေ့ချ်များ ပိုမိုရရှိပါမည်။
စနစ်စတင်ချိန် သို့မဟုတ် ဟာ့ဒ်ဒရိုက်ကိုဝင်ရောက်သည့်အခါတိုင်းတွင် ကလစ်နှိပ်သည့်အသံရှိသည်။
အကယ်၍ PC သည် ဟာ့ဒ်ဒစ်ပေါ်ရှိ ဒေတာများကို ဝင်ရောက်ရန် ပုံမှန်ထက် ပိုကြာနေပါက။
ဟာ့ဒ်ဒရိုက်တွင် အချက်အလက်များ ချို့တဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်း။
ဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် PC တွင်ဤအပြုအမူအမျိုးအစားကိုသတိထားပါ။. ၎င်းတို့သည် ပြဿနာများ၏ သဲလွန်စတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောကြောင့် တစ်ချိန်ချိန်တွင် Error 0x80070570 ကိုတွေ့ရှိပါက ထူးဆန်းမည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် များသောအားဖြင့် ၎င်းတို့နှင့်အတူ ပိုမိုဆိုးရွားသော ကျရှုံးမှုများကို ယူဆောင်လာသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော ချွတ်ယွင်းချက်များကို သတိထားရန် အရေးကြီးပါသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows တွင် 0x80070570 အမှားနှင့်ကြုံတွေ့ရပါက၊ဖြေရှင်းချက်အချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တွေ့မြင်နိုင်ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် ၎င်းတွင် အပ်ဒိတ်တပ်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့သော ကွန်ပျူတာ၏လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိခိုက်စေမည့် ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စရပ်တွင် ဤအမှားအယွင်း မက်ဆေ့ချ်ပေါ်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် အသုံးချနိုင်စေမည့် ဖြေရှင်းချက်များစွာရှိသည်။
ဤပြဿနာအတွက် တစ်ခုတည်းသော အရွယ်အစား-ကိုက်ညီ-အားလုံးအတွက် ဖြေရှင်းချက်မရှိပါ။ အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေမည့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းအခြားကိစ္စများတွင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးသည့်အရာကိုနောက်ဆုံးမတွေ့မချင်းကြိုးစားရလိမ့်မည်။
ကွန်ပျူတာကို Restart လုပ်ပါ
A truism ဖြေရှင်းချက်, ဒါပေမယ့်ဘာလဲ Error 0x80070570 ကိုပြင်ရန်လည်းအလုပ်လုပ်သည်၊ Windows တွင် အခြားသော bug များ အများအပြားလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် error message တစ်ခုရှိနေသောအခါ၊ ၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် အရာအားလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကြိမ်များစွာ ဤအမှားအယွင်းအချို့သည် ပြဿနာရှိခဲ့ဖူးသော PC ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၎င်းတို့၏မူလအစရှိသည်။
၎င်းသည် ဤကိစ္စများတွင် အလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ဤကိစ္စရပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားမည့် ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အမြဲအကြံပြုထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများစွာအတွက် အဆင်ပြေသည့်အရာတစ်ခုသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကွန်ပြူတာကို ပြန်လည်စတင်ပြီး ထိုဖိုင်ကိုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ထိုအပ်ဒိတ်ကို ထည့်သွင်းရန် ထပ်မံကြိုးစားပါ။
အပ်ဒိတ်တစ်ခုသည် အမြဲတမ်းမဟုတ်သော်လည်း ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ဤအမှား 0x80070570 ၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ Windows တွင်ဤပြဿနာရှိသောအခါတွင်၎င်းသည်ဤသဘောဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ အမှားအယွင်း မက်ဆေ့ချ်သည် ပြုပြင်ပေးမည့် ပျက်စီးနေသော ဖိုင်ဟောင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော ဖိုင်များနှင့် ဆက်စပ်နေနိုင်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည် operating system ၏ ဗားရှင်းအသစ်သို့ အဆင့်မြှင့်မည်ဆိုပါက သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးပေါ် လုံခြုံရေး ပက်ခ်ကို ရနိုင်သည်။
အပ်ဒိတ်များ ရနိုင်လားရှိမရှိကို ကြည့်ရှုနိုင်သည့် သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်၏ ကဏ္ဍသို့သွားပါ။ Windows 10 ရှိလျှင် Update အဖြစ်. PC အတွက် အပ်ဒိတ်တစ်ခု ရနိုင်ပါက၊ စနစ်အပ်ဒိတ် သို့မဟုတ် လုံခြုံရေး ပက်ခ်ဖြစ်ပါက ၎င်းကို ထည့်သွင်းရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ၎င်းကို သင်ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ အရာအားလုံး ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဤအမှားသည် ရပ်တန့်သွားပေမည်။
အချို့ကိစ္စများတွင် Error 0x80070570 ထွက်လာသည်။ သင့်ကွန်ပြူတာတွင် အပ်ဒိတ်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းရန် ကြိုးစားသောအခါငါတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ။ အကယ်၍ ထိုသို့ဖြစ်ပါက၊ သင်သည် PC တွင် ပြောကြားထားသော Windows update ကို တပ်ဆင်ရန် အတင်းအကြပ်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မဟုတ်ပါက ၎င်းကို လုပ်ဆောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့် ၎င်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အကြိမ်နှစ်ဆယ်ခန့် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ပြီးမြောက်ရန် မဖြစ်နိုင်တော့ဘဲ စခရင်ပေါ်တွင် ဤအမှားသတင်းကို ဆက်လက်ရရှိနေပါသည်။
သင်သည် သင့်ကွန်ပျူတာကို ပြန်လည်စတင်နိုင်ပြီး ဤအပ်ဒိတ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤအရာသည် ကိစ္စအများစုတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ဤအမှားအယွင်းမက်ဆေ့ချ်မပါဘဲ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာမည့် အဆိုပါအပ်ဒိတ်ကို ထည့်သွင်းနိုင်စေမည့် အရာဖြစ်သည်။ အပ်ဒိတ်များနှင့် ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးကဏ္ဍတွင် ၎င်းကို သင်စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Windows တွင် ရနိုင်ပြီးသားဖြစ်သော အဆိုပါအပ်ဒိတ်ကို ရှာဖွေရန် ခိုင်းစေနိုင်သည်။
ဒီလိုလုပ်ရင် အရေးကြီးတယ်။ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့် လိုအပ်သော အက်ပ်များ သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်များကို မသုံးပါနှင့်. ဤနည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်မှု သို့မဟုတ် bandwidth ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် မေးခွန်းထုတ်ထားသော အပ်ဒိတ်သို့ ဦးတည်ထားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စံပြအနေနဲ့ကတော့ Windows မှာ အပ်ဒိတ်ထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် WiFi သို့မဟုတ် ကေဘယ်လ်ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြုဖို့ပါပဲ။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် ၎င်းကို မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
hard drive ပျက်စီးမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ဤ Error 0x80070570 မက်ဆေ့ချ် မပေါ်မီတွင် အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာအချို့ကို သင်သတိပြုမိပြီဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, hard drive တွင် ထိခိုက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးပါသည်။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤမက်ဆေ့ချ်ကို စခရင်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ ခဏတာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အခုအချိန်အထိ ကျွန်တော်တို့ ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ ထို့ကြောင့် အချိန်မီ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည် စဉ်းစားရမည့် နောက်ထပ် အဖြေတစ်ခု ဖြစ်သည်။
သင်၏ Windows ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။ဘောပင်ဒရိုက် သို့မဟုတ် ပြင်ပဟာ့ဒ်ဒရိုက်ကဲ့သို့ ဤအမှားကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနေသည့် ဤယူနစ်တွင် အခြားယူနစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ပျက်စီးမှု အမျိုးအစား ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုယူနစ်နှင့်ပတ်သက်သော အဖိုးတန်အချက်အလက်များကိုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် စခရင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည့် ဤအမှား၏ဇာစ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။
ဤ Error 0x80070570 ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည့်နောက်ထပ်အခြေအနေ တစ်ချို့ဖိုင်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကွန်ပျူတာသို့ ယခုလေးတင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော ဖိုင်တစ်ခုနှင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ယိုယွင်းနေပြီး ၎င်းကို ဖွင့်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ညွှန်ပြပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင်၊ ဤဖိုင်ကို ထပ်မံဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကြိုးစားနိုင်သည်။ ပထမဒေါင်းလုဒ်မအောင်မြင်ခြင်း သို့မဟုတ် တူညီသောပြဿနာတစ်ခုရှိခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖိုင်ကိုဖွင့်၍မရပါ။
ထိုကွောငျ့, မေးခွန်းအတွက် ဖိုင်ကို ထပ်မံဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။. ၎င်းသည် ပရိုဂရမ် သို့မဟုတ် အက်ပ်ဖြစ်ပါက၊ အခြားဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှ သို့မဟုတ် သင့် PC ရှိ အခြားဘရောက်ဆာမှလည်း စမ်းကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် ထိုအချိန်တွင် ဒေါင်းလုဒ်မအောင်မြင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အတွက် မတူညီသောရွေးချယ်စရာများကို စမ်းကြည့်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား ဖွင့်နိုင်သော ဖိုင်တစ်ခုရှိသည်၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိပါ။
အခြားကိစ္စများတွင် တစ်စုံတစ်ဦးမှ ဤအမှားအယွင်း မက်ဆေ့ချ်ပေါ်လာပါသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပူးတွဲပါဖိုင်ကို အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့ထားသည်။. အကယ်၍ ထိုသို့ဖြစ်ပါက၊ တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းနေသည်မှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသောကြောင့် အဆိုပါလူအား မေးခွန်းဖိုင်ကို ထပ်မံပေးပို့ရန် သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေများသည်မှာ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်က ကျွန်ုပ်တို့အား မေးခွန်းထုတ်ထားသော ဖိုင်ကို ထပ်မံပေးပို့သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကယ်၍ သင်သည် ဤဖိုင်ကိုဖွင့်ရန် သင့်လျော်သောအက်ပ်ကို အသုံးပြုနေသလား၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PC ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့မသိသော သို့မဟုတ် မသုံးတတ်သည့်ဖော်မတ်တစ်ခုဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စရပ်တွင် ဤပြဿနာကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင် အများအပြားရှိနေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့် ဖွင့်မချနိုင်တာလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » ရုံးအလိုအလျောက် » အမှား 0x80070570- ၎င်းသည် အဘယ်နည်း၊ ၎င်းကို ဖြေရှင်းနည်း
USB ကို စကားဝှက်နဲ့ ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
Hotmail သို့ အကောင့်ဝင်ပါ- ရွေးချယ်စရာအားလုံး